တံမွကျစညျး - ONE DAILY MEDIA
” အိမျပျေါမှာနရေတဲ့ တံမွကျစညျးလေး ဖွဈရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ ၊ သူ့ဘဝကတြော့ နလေဲမပူ.. ကွမျးတဲ့ ကြောကျစရဈတှနေဲ့ မတှရေ့ ၊ ကငျြကွီး ကငျြငယျနဲ့လညျး မဆုံရတော့ သူ့ဘဝ သိပျ သာယာနမှောပဲ ” ဆိုပွီး သူ့မိတျဆှေ ဖွဈတဲ့ အိမျပျေါမှာ အလှညျးခံရတဲ့ တံမွကျစညျးကို အားကနြမေိ ပါတယျတဲ့ ။ နောကျပွီး..
” သူက အိမျပျေါမှာ နရေတော့ သငျးပြံ့တဲ့ ရနံ့တှနေဲ့ နရေမှာပဲ.. ငါ့လို ဘဝ မကွမျးလောကျဘူး.. ငါလညျး သူ့လို ဘဝရောကျရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ ” ဆိုပွီး အမွဲ တှေးပွီး နတေတျသေးတယျ တဲ့..
” သူငယျခငျြး.. မငျးဘဝက သိပျပီး သာယာတာ ပဲကှာ ၊ ငါ့လို မကွမျးတမျးဘူး ၊ မကောငျးတဲ့ ရနံ့တှနေဲ့ မထိတှေ့ ရဘူး ။ မငျးဘဝက သိပျပြျောစရာ ကောငျးမှာပဲ ” လို့ ပွောရှာ သတဲ့..
” မငျးလို ဘဝမြိုး နခေငျြလိုကျတာ ” လို့လညျး ခဏခဏ ပွောသတဲ့ ။ ဒါနဲ့ အိမျပျေါက တံမွကျစညျးက ပွနျပွောလိုကျတာက..
” တကယျတော့ ငါ့ဘဝကို အပွငျက မွငျရငျတော့ သာယာတယျ လို့ မငျးထငျခငျြထငျလိမျ့မယျ သူငယျခငျြးရယျ.. တကယျတော့ ငါ့ဘဝက မသာယာပါဘူးကှာ.. ”
” လငျမယားခငျြး ရနျဖွဈလညျး ငါ့ကို ဆှဲပွီး ရိုကျကွတယျ ၊ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဆှဲကွ လုကွတော့ ငါ နာကငျြရတယျ ၊ သားသမီးကို ရိုကျပွီ ဆိုလညျး ငါ့ကို အသုံးပွုတယျ။ အဲ့ဒီအခါလညျး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဆှဲကွ လုကွ ပွနျရော.. ”
” ငါ့ဘဝက မငျးလို မကွမျးတမျးပမေယျ့ နစေ့ဉျ နားငွီးရ သလို ၊ နာကငျြတဲ့ ဝဒေနာ ခံစားရတယျ ၊ စိတျရှုပျရတယျ ။ ငါ့ဘဝက ပငျပနျးတာ မခံရ ပမေယျ့ စိတျရှုပျစရာကွီး ပါကှာ ။ ”
” နောကျပွီး ငါ့ကို ဘယျနားမှာ ထားတာလဲ မငျးသိလား? ခွနေငျးခုံနား မှာ ထားတာကှ ။ ဟိုလူ လာလဲ တိုကျသှား.. ဒီလူလာလညျး နငျးသှားနဲ့ကှာ ၊ သခေငျြစျော ကို နံရော ” လို့ ပွောပွလိုကျတော့.. အိမျအောကျ တံမွကျစညျးက သူ့ဘဝသူ ကနြေပျသလို ခံစားရသှားတယျတဲ့ ။အခု အခြိနျ မှာတော့ သူတှေးလိုကျတာက..
” ဪ.. အပွငျ ပုံသဏ်ဌာနျ လှပမေယျ့ ဘဝရဲ့ဒုက်ခတှကေ ငါ့ထကျ မြားလှပါလား ၊ တကယျတော့ ငါ့ဘဝက ကွမျးပမေယျ့ သူ့လောကျ မဆိုးသေး ပါလား ” လို့တှေးပွီး ခေါငျးငုံ့ကာ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ သူ့နရောသူ ပွနျကွပါသတဲ့ ။
” အိမ်ပေါ်မှာနေရတဲ့ တံမြက်စည်းလေး ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ၊ သူ့ဘဝကျတော့ နေလဲမပူ.. ကြမ်းတဲ့ ကျောက်စရစ်တွေနဲ့ မတွေ့ရ ၊ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်နဲ့လည်း မဆုံရတော့ သူ့ဘဝ သိပ် သာယာနေမှာပဲ ” ဆိုပြီး သူ့မိတ်ဆွေ ဖြစ်တဲ့ အိမ်ပေါ်မှာ အလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းကို အားကျနေမိ ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပြီး..
” သူက အိမ်ပေါ်မှာ နေရတော့ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေနဲ့ နေရမှာပဲ.. ငါ့လို ဘဝ မကြမ်းလောက်ဘူး.. ငါလည်း သူ့လို ဘဝရောက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ” ဆိုပြီး အမြဲ တွေးပြီး နေတတ်သေးတယ် တဲ့..
” သူငယ်ချင်း.. မင်းဘဝက သိပ်ပီး သာယာတာ ပဲကွာ ၊ ငါ့လို မကြမ်းတမ်းဘူး ၊ မကောင်းတဲ့ ရနံ့တွေနဲ့ မထိတွေ့ ရဘူး ။ မင်းဘဝက သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းမှာပဲ ” လို့ ပြောရှာ သတဲ့..
” မင်းလို ဘဝမျိုး နေချင်လိုက်တာ ” လို့လည်း ခဏခဏ ပြောသတဲ့ ။ ဒါနဲ့ အိမ်ပေါ်က တံမြက်စည်းက ပြန်ပြောလိုက်တာက..
” တကယ်တော့ ငါ့ဘဝကို အပြင်က မြင်ရင်တော့ သာယာတယ် လို့ မင်းထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ် သူငယ်ချင်းရယ်.. တကယ်တော့ ငါ့ဘဝက မသာယာပါဘူးကွာ.. ”
” လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်လည်း ငါ့ကို ဆွဲပြီး ရိုက်ကြတယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆွဲကြ လုကြတော့ ငါ နာကျင်ရတယ် ၊ သားသမီးကို ရိုက်ပြီ ဆိုလည်း ငါ့ကို အသုံးပြုတယ်။ အဲ့ဒီအခါလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆွဲကြ လုကြ ပြန်ရော.. ”
” ငါ့ဘဝက မင်းလို မကြမ်းတမ်းပေမယ့် နေ့စဉ် နားငြီးရ သလို ၊ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတယ် ၊ စိတ်ရှုပ်ရတယ် ။ ငါ့ဘဝက ပင်ပန်းတာ မခံရ ပေမယ့် စိတ်ရှုပ်စရာကြီး ပါကွာ ။ ”
” နောက်ပြီး ငါ့ကို ဘယ်နားမှာ ထားတာလဲ မင်းသိလား? ခြေနင်းခုံနား မှာ ထားတာကွ ။ ဟိုလူ လာလဲ တိုက်သွား.. ဒီလူလာလည်း နင်းသွားနဲ့ကွာ ၊ သေချင်စော် ကို နံရော ” လို့ ပြောပြလိုက်တော့.. အိမ်အောက် တံမြက်စည်းက သူ့ဘဝသူ ကျေနပ်သလို ခံစားရသွားတယ်တဲ့ ။အခု အချိန် မှာတော့ သူတွေးလိုက်တာက..
” ဪ.. အပြင် ပုံသဏ္ဌာန် လှပေမယ့် ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေက ငါ့ထက် များလှပါလား ၊ တကယ်တော့ ငါ့ဘဝက ကြမ်းပေမယ့် သူ့လောက် မဆိုးသေး ပါလား ” လို့တွေးပြီး ခေါင်းငုံ့ကာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သူ့နေရာသူ ပြန်ကြပါသတဲ့ ။